Ngwaahịa ndị na - ebubata ya na ụlọ ọrụ ya - ndị na-emepụta ngwaahịa ndị China
Imeghe, nsonye, ​​obi ike na nyocha bụ mmegharị ahụ anyị, okwu na omume anyị bụ nkwa anyị, nsonaazụ ya bụ ule nke ụkpụrụ anyị.
Egwu ohuru na-enwe obi ụtọ n'isi nke isi-R100
Igwe nwere ntị nwere ike ọ bụghị naanị na ịchebe ntị anyị nke ọma, mana nke ka mkpa bụ na ụda olu ọ na-eweta nwere ike ime ka ntị gị dị ime na nkeji. N'oge a, egwu abụrụla otu ụzọ isi emebie ugbu a, ọbụnakwa bụrụ ngwa maka itinye uche.
Egwu ohuru na-enwe obi ụtọ isi na ndụ-S9 XR
Ihe ederede maka ekweisi egwuregwu:
Lezienụ anya n'otú ekweisi si eyi, ma họrọ imewe nke nwere ike ịdapụ
Ma jijiji n’ahụ́ mgbe a na-agba mwe mwe ọsọ nwere ike ime ka ntị nụ daa. Ya mere, nkasi obi na nkwụsi ike dị ezigbo mkpa mgbe ha na-eyi ha. Ọ m
Egwu ohuru na-ekpori ndụ na isi ekweisi-C4
Maka ndị na-eto eto n'oge a, gịnị bụ igweisi? Igwe ntị bụ ụzọ ụzọ ntụgharị. Ọ na-anabata akara eletrik nke onye mgbasa ozi ma ọ bụ onye nata mgbasa ozi zitere, ma gbanwee ya ka ọ bụrụ ụda ebili mmiri a na-anụ site na iji ọkà okwu dị nso na ntị. Isi ihe n'ozuzu enwere ike iwepu ya na ihe ọkpụkpọ mgbasa ozi ma jikọọ ya na plọg. Uru dị na ya bụ na ịnwere ike ige ụda naanị gị n’ emetụtaghị ndị ọzọ; ma ọ bụ ụda nke gburugburu ebe obibi. Maka ndekọ ụlọ ọrụ, Ogwe, njem, egwuregwu, wdg, ...
Ntụrụndụ kwa ụbọchị: Na ndụ kwa ụbọchị, ndị na-enweghị obere ihe ntụrụndụ nke ha, igwu egwuregwu TV na igwu egwuregwu bụ ihe omume ntụrụndụ kwa ụbọchị. Ọ bụrụ na ịchọrọ inwe ahụmịhe ntụrụndụ ka mma, mikpuo onwe gị na ụwa nke gị. Wee họrọ ekweisi site na ụda mkpuchi ka mma. Ekweisi n'ozuzu nwere ntị dị mma nke na-ekpuchi ntị, nke nwere ike iwepụ mkpọtụ mpụga, weta ahụmịhe mara mma nke ọma n'okpuru mbenata mkpọtụ, ma mee ka uche dị na ya.
Egwu ohuru na-enwe obi ụtọ n'isi nke isi-E300
Ngwa ndị a kapịrị ọnụ na igwe okwu ikuku na-arụ ọrụ gụnyere akụkụ ndị a: iwu saịtị dị ka ngwa igwe na-ebuli elu, ndị ọrụ ụgbọelu ụgbọelu, ụlọ ọrụ na-ere ahịa, nchekwa ọkụ, nyocha mmanụ na nsị, yana nnukwu ọrụ ngwa ọrụ, ọzụzụ na oge ndị ọzọ. Oge ndị a n'ozuzu nwere njirimara ndị a: enwere ike ịnwe oke ihe egwu, ma ọ bụ mmejọ arụmọrụ ga-eweta nsonaazụ na-enweghị atụ, ozi bụ gras ...
Egwu ohuru na-enwe obi ụtọ n'isi nke isi-E600
Igweisi bụ ngwa ntụgharị electro-acoustic nke na-atụgharị akara eletriki nke ụda n'ime ụda. E nwere usoro ọwa abụọ na ọtụtụ ọwa na nka tupu, ọ bụ ezie na ha nwere ụda doro anya na nkesa onyonyo. Ma ha na-agbasa na ahịrị ma ọ bụ ụgbọelu, sistemu stere zuru ezu kwesịrị ịbụ ụda olu gbara gburugburu nke nwere oghere akụkụ atọ. A na-ebute stereo akụkụ atọ ma mepụtaghachi ya site na usoro ọwa anọ. N'oge a, ndị ọkà okwu anọ kwesịrị b ...
Egwu ohuru na-ekpori ndụ na isi ekweisi-R200
Ginị bụ ekweisi dị elu? Isi arụmọrụ nke isi-ikwesi olu ike nke akwadoro na akwụkwọ International Electrotechnical Commission IEC581-10 bụ: ọnụọgụ ọnụọgụ adịghị ihe na-erughị 50Hz-12500Hz, na nzaghachi kachasị mma nke ekweisi na-agbanwe agbanwe ugbu a bụ ihe dị ka 5-45,000Hz; njehie a na-ekwe ka a na-enwekarị ụdị nzaghachi na-adịghị mma na nke 3dB; mkpọda nke usoro nzaghachi ugboro ole anaghị agafe 9dB kwa octave; n'ime 250Hz-800Hz, ihe dị iche ga -...
Mgbe ekweisi dị na aka, anyị ga-ebu ụzọ jaa ekweisi ahụ. Maka nke a, ekwere m na onye ọ bụla ga-ama ma ọ bụrụ na anaghị m ekwu ya. Anyị nwere ike ịnụ ụtọ ya mgbe akwadochara ya, mana ọ bụ na ihe niile anaghị aga nke ọma ma ọ bụrụhaala na a kụrụ ha? Azịza ya bụ mba, ogo ụfọdụ ekwe ntị dị ezigbo mma, maka na anyị na-ejikarị ekwe ntị anyị anyị hụrụ n'anya anwụ anwụ ngwa ngwa n'ihi na anyị akpacharaghị anya n'iji ya! Ndị a bụ ụfọdụ ọnọdụ nkịtị na usoro ịmezi ekweisi, m ga-enyekwa gị ...
Egwu ohuru na-ekpori ndụ na isi isi-R600